Sababtii Uu Xilliga Dambe U Qaatay Go’aankii Uu Ku Fadhiisiyey Messi, Halistii Inter Milan, Usoo Bixidda Wareegga 16-ka iyo Tababare Ernesto Valverde Oo Ka Hadlay Dhawr Arrimood – Cadalool.com
Sababtii Uu Xilliga Dambe U Qaatay Go’aankii Uu Ku Fadhiisiyey Messi, Halistii Inter Milan, Usoo Bixidda Wareegga 16-ka iyo Tababare Ernesto Valverde Oo Ka Hadlay Dhawr Arrimood
Gool uu Barcelona u dhaliyey laba daqiiqadood oo kaliya markii uu garoonka ku jiray laacibka reer Brazil ee Malcom ayaa ka caawiyey inay u gudubto wareegga 16-ka oo ay noqotay naadigii ugu horreeyey ee booskiisa xaqiijista tartanka Champions League ee xili ciyaareedkan.
Maruo Icardi ayaa lix daqiiqadood kaddib goolka Malcom waxa uu Inter Milan u dhalliyey goolka barbar-dhaca oo ciyaarta ku dhameeyey 1-1, hase yeeshee waxa soo noolaatay rajada Tottenham oo kula jirta Group B oo 2-1 kaga adkaatay PSV Eindhoven, waxaase natiijada ciyaartani farxad weyn u tahay tababaraha Barcelona ee Ernesto Valverde oo labadii ciyaarood ee Inter Milan uu ka hor tegayba uu ka maqnaa xiddiga guulaha u keena ee Lionel Messi.
Valverde ayaa liiska ciyaartoygiisa ku daray Lionel Messi, hase yeeshee waxa uu ka reebay safkiisa iyadoo uu ka baqayay in uu halis galo dhaawaca uu ka qabo gacanta, oo la filayo inuu saddex tododbaad ku maqnaado.
Tababaraha oo ciyaarta kaddib hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in kooxdiisu iska xaadirisay wareegga 16-ka, waxaanu faahfaahin ka bixiyey go’aankii uu xilliga dambe ku qaatay in aanu ciyaarsiinin Lionel Messi oo uu markii hore kusoo darsaday ciyaartoygiisa ula safray Talyaaniga.
“Waxaanu doonaynay inaanu hoggaanka sii hayno, waxaananu samaynay wax kasta oo suurtogal ah laakiin waxaanu ku faraxsanahay inaanu soo baxnay.
“Waxaanu soo bandhignay ciyaar wanaagsan, tayada Inter Milan na waa inay garanayso inay si wanaagsan isku habayso, waxaanay kulamadii ugu dambeeyey xoogsadeen dibco badan.” Sidaas ayuu yidhi tababare Ernesto Valverde oo warbaahinta la hadlay markii ay dhamaatay ciyaartii kooxdiisu barbarraha kula gashay Inter Milan.
Tababaruhu waxa kale oo uu ka hadlay sababtii uu Messi oo ku jiray liiskiisa u ciyaarsiin waayey, waxaanu yidhi: “Ma aanaan doonaynin inaanu khatar gelino Leo. Tababarka waanu ka taxadaraynay laakiin waxaanu ogeyn in ciyaartii maanta (xalay) ay ahaanayso sidii ay noqotay.”
Ernesto Valverde waxa kale oo uu xusay in ciyaartoodu ku dhisan tahay weerar iyo inay cadaadis saaraan koox kasta oo ay ka hor yimaaddaan, sidaas daraadeedna ay Inter Milan iyo Tottenham labadaba qaab wanaagsan ugula ciyaareen.